ကော်ဖီချစ်သူတိုင်းစွဲလမ်းရတဲ့ ရွက်ပုန်းသီးကော်ဖီဆိုင်လေး "Cafe BURMA"
ကော်ဖီချစ်သူတိုင်းစွဲလမ်းရတဲ့ ရွက်ပုန်းသီးကော်ဖီဆိုင်လေး “Cafe BURMA”
12 Jun 2018 . 4:53 PM
အရင်တစ်ပတ်က မိုးရာသီအတွက် အကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်လေးတွေကို List လုပ်ပေးပြီးပြီဆိုတော့ကာ ဒီတစ်ခါတော့ အခရာက အလိုက်တသိပဲ မိုးစက်တွေနဲ့အလိုက်ဆုံး ဗမာ့နှပ်ကော်ဖီမွှေးမွှေးလေးနဲ့ ရင်ထဲထိနွေးထွေးစေမယ့် ရွက်ပုန်းသီးကော်ဖီဆိုင်သေးသေးလေးအကြောင်း ပြောပြပေးပါမယ်နော်။
Cafe BURMA ဆိုတာက ကမ်းနားလမ်းနဲ့ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းထောင့်က Strand Square ရဲ့ အောက်ထပ်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်သေးသေးပုစိလေးပေါ့။ သေးတာမှ ဆိုင်ထဲဆို ခုံတန်းလေး ၂တန်းလောက်နဲ့ အပြင်မှာ စားပွဲခုံလေး ၂ခုံလောက်စာပဲ ရှိတယ်။ ဒါတောင် အဲ့စားပွဲလေးတွေက မိုးရွာရင် မိုးပါစင်တာ။
အဲ့တော့ အဓိကဆို Take Away ကိုပဲ အားပေးရမယ်။ ဒါပေမယ့် သေးသလောက် ဆိုင်ရဲ့ပရိသတ်တွေက မိုးထဲလေထဲတောင်အားပေးကြတာတွေ့ရတယ်။ ဒီနေ့ Strand Square ဘက်ရောက်တော့ Review ကောင်းကောင်းရထားတဲ့ဒီဆိုင်လေးကို ဝင်စပ်စုရင်း ကိုယ့်လူတွေအတွက် ညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။
ကိုယ်တို့တွေအားလုံး ပုရိသမှန်သမျှ စွဲလမ်းမှုတွေက ခပ်များများရယ်မလား? အဲ့ထဲမယ် ကော်ဖီကို စွဲလမ်းတဲ့သူကတော့ အချိုးအဆအများဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ။ ကော်ဖီထဲကတောင်မှ ကိုယ့် Taste နဲ့အကိုက်ဆုံးကော်ဖီဆို တခြားဆိုင်တွေဘယ်မှမဝင်ဖြစ်ပဲ နှစ်ကြာကြာဒီဆိုင်မှ ဒီဆိုင် စွဲလမ်းတဲ့ သူတွေလည်းများမှာပေါ့။ အဲ့လိုလူတွေစွဲစွဲလမ်းလမ်း ရွေးချယ်သောက်တဲ့ ကော်ဖီဆိုပြီး ဒီဆိုင်လေးက နာမည်ကြီးလေရဲ့။
Cappuccino ၊ Espresso ၊ Americano ၊ Mocha ၊ Latte အမျိုးစုံရတဲ့အပြင် Yoghurt ၊ Smoothie ၊ Soda ၊ Lemon Tea နဲ့ Fruit Juice တွေရတဲ့အပြင် မြန်မာစာလေးတွေဖြစ်တဲ့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ၊ ကြာဆံဆီချက်၊ ဆီထမင်း မြန်မာမုန့်လေးတွေလည်း ရသေးသတဲ့။ အိမ်လုပ် Cheese Sandwich လေးတွေနဲ့ Puff လေးတွေကတော့ တကယ်အရသာအိအိလေးနဲ့ ဆိမ့်နေအောင်စားကောင်းပါတယ်။ ၈၀၀ ၊၁၀၀၀ ဝန်းကျင်ဆိုတော့ တန်များနေမလား။
တစ်ခုသဘောကျရတာက အရည်အသွေးကိုပါ။ ကော်ဖီစေ့ကအစ ပြင်ဦးလွင်က ကော်ဖီစေ့ကို မွှေးနေအောင်နှပ်ထားတာမို့ ကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူတွေ စွဲလမ်းစေမယ့် အရသာကောင်းကောင်းကို သောက်ရတာပါပဲ။ တစ်ခွက် ၁၅၀၀ ၊ ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ဆိုတော့ အိမ်နားသာဆို နေ့တိုင်းသွားထိုင်ဖြစ်မလားပဲ။
အစားအစာလေးတွေကလည်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်းစားရတာမို့ စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ ဆိုင်သေးသေးလေးပေမယ့် ဝန်ထမ်းများများနဲ့သဘောကောင်းတာတွေ့တော့လည်း ကျေနပ်မိတာပဲ။ ဒီလိုဆိုင်ကောင်းလေးတွေရှိနေတာ အရည်အသွေးကောင်းကောင်းစားခွင့်၊ သောက်ခွင့်ရတာမို့ စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။
ဈေးလည်း ၁၀၀၀ ၀န်းကျင် ၂၀၀၀ ကြားဆိုတော့ အရည်အသွေး နဲ့ တန်ဖိုးပေးပျော်ပါတယ်။
နေသာမိုးအုံ့တဲ့ နေ့လေးများမှာတော့ ဆိုင်ရှေ့ကခုံလေးမှာ Espresso လေးတစ်ခွက်နဲ့ ထိုင်ရင်း၊ တွေးရင်း ၊ ဆွေးကြည့်ဦးနော်။ တစ်ခုမကောင်းတာလည်း ရှိသေးတယ်။ အဲ့နားက ကားရှုပ်တော့ ကားရပ်ရခက်လို့ စိတ်ပါရှုပ်ရတာတစ်ခုပဲ။ ညနေလေးတွေလည်း ထိုင်လို့ကောင်းတယ်။
Credit to Cafe BUMAR Facebook Page
လိပ်စာလေးက Unit ၁၀၇ ၊ အမှတ် ၅၃ ၊ ကမ်းနားလမ်း၊ Strand Square မှာပါတဲ့။ မနက် ၈ နာရီကနေ ည ၆ နာရီထိဖွင့်ပါတယ်။ စနေဆိုရင်တော့ နေ့ခင်းတစ်နာရီထိပဲဖွင့်ပြီး တနင်္ဂနွေတစ်ရက်ပိတ်ပါတယ်တဲ့။
ကျောဖီခဈြသူတိုငျးစှဲလမျးရတဲ့ ရှကျပုနျးသီးကျောဖီဆိုငျလေး “Cafe BURMA”
အရငျတဈပတျက မိုးရာသီအတှကျ အကောငျးဆုံးကျောဖီဆိုငျလေးတှကေို List လုပျပေးပွီးပွီဆိုတော့ကာ ဒီတဈခါတော့ အခရာက အလိုကျတသိပဲ မိုးစကျတှနေဲ့အလိုကျဆုံး ဗမာ့နှပျကျောဖီမှေးမှေးလေးနဲ့ ရငျထဲထိနှေးထှေးစမေယျ့ ရှကျပုနျးသီးကျောဖီဆိုငျသေးသေးလေးအကွောငျး ပွောပွပေးပါမယျနျော။
Cafe BURMA ဆိုတာက ကမျးနားလမျးနဲ့ ဗိုလျဆှနျပကျလမျးထောငျ့က Strand Square ရဲ့ အောကျထပျမှာ ဖှငျ့ထားတဲ့ ဆိုငျသေးသေးပုစိလေးပေါ့။ သေးတာမှ ဆိုငျထဲဆို ခုံတနျးလေး ၂တနျးလောကျနဲ့ အပွငျမှာ စားပှဲခုံလေး ၂ခုံလောကျစာပဲ ရှိတယျ။ ဒါတောငျ အဲ့စားပှဲလေးတှကေ မိုးရှာရငျ မိုးပါစငျတာ။
အဲ့တော့ အဓိကဆို Take Away ကိုပဲ အားပေးရမယျ။ ဒါပမေယျ့ သေးသလောကျ ဆိုငျရဲ့ပရိသတျတှကေ မိုးထဲလထေဲတောငျအားပေးကွတာတှရေ့တယျ။ ဒီနေ့ Strand Square ဘကျရောကျတော့ Review ကောငျးကောငျးရထားတဲ့ဒီဆိုငျလေးကို ဝငျစပျစုရငျး ကိုယျ့လူတှအေတှကျ ညှနျပေးလိုကျပါတယျရှငျ့။
ကိုယျတို့တှအေားလုံး ပုရိသမှနျသမြှ စှဲလမျးမှုတှကေ ခပျမြားမြားရယျမလား? အဲ့ထဲမယျ ကျောဖီကို စှဲလမျးတဲ့သူကတော့ အခြိုးအဆအမြားဆုံးဖွဈမယျထငျတာပဲ။ ကျောဖီထဲကတောငျမှ ကိုယျ့ Taste နဲ့အကိုကျဆုံးကျောဖီဆို တခွားဆိုငျတှဘေယျမှမဝငျဖွဈပဲ နှဈကွာကွာဒီဆိုငျမှ ဒီဆိုငျ စှဲလမျးတဲ့ သူတှလေညျးမြားမှာပေါ့။ အဲ့လိုလူတှစှေဲစှဲလမျးလမျး ရှေးခယျြသောကျတဲ့ ကျောဖီဆိုပွီး ဒီဆိုငျလေးက နာမညျကွီးလရေဲ့။
Cappuccino ၊ Espresso ၊ Americano ၊ Mocha ၊ Latte အမြိုးစုံရတဲ့အပွငျ Yoghurt ၊ Smoothie ၊ Soda ၊ Lemon Tea နဲ့ Fruit Juice တှရေတဲ့အပွငျ မွနျမာစာလေးတှဖွေဈတဲ့ ကျောရညျခေါကျဆှဲ၊ ကွာဆံဆီခကျြ၊ ဆီထမငျး မွနျမာမုနျ့လေးတှလေညျး ရသေးသတဲ့။ အိမျလုပျ Cheese Sandwich လေးတှနေဲ့ Puff လေးတှကေတော့ တကယျအရသာအိအိလေးနဲ့ ဆိမျ့နအေောငျစားကောငျးပါတယျ။ ၈၀၀ ၊၁၀၀၀ ဝနျးကငျြဆိုတော့ တနျမြားနမေလား။
တဈခုသဘောကရြတာက အရညျအသှေးကိုပါ။ ကျောဖီစကေ့အစ ပွငျဦးလှငျက ကျောဖီစကေို့ မှေးနအေောငျနှပျထားတာမို့ ကျောဖီကွိုကျတဲ့သူတှေ စှဲလမျးစမေယျ့ အရသာကောငျးကောငျးကို သောကျရတာပါပဲ။ တဈခှကျ ၁၅၀၀ ၊ ၂၀၀၀ ဝနျးကငျြဆိုတော့ အိမျနားသာဆို နတေို့ငျးသှားထိုငျဖွဈမလားပဲ။
အစားအစာလေးတှကေလညျး သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးစားရတာမို့ စိတျခမျြးသာရပါတယျ။ ဆိုငျသေးသေးလေးပမေယျ့ ဝနျထမျးမြားမြားနဲ့သဘောကောငျးတာတှတေ့ော့လညျး ကနြေပျမိတာပဲ။ ဒီလိုဆိုငျကောငျးလေးတှရှေိနတော အရညျအသှေးကောငျးကောငျးစားခှငျ့၊ သောကျခှငျ့ရတာမို့ စိတျခမျြးသာရပါတယျ။
ဈေးလညျး ၁၀၀၀ ဝနျးကငျြ ၂၀၀၀ ကွားဆိုတော့ အရညျအသှေး နဲ့ တနျဖိုးပေးပြျောပါတယျ။
နသောမိုးအုံ့တဲ့ နလေ့ေးမြားမှာတော့ ဆိုငျရှကေ့ခုံလေးမှာ Espresso လေးတဈခှကျနဲ့ ထိုငျရငျး၊ တှေးရငျး ၊ ဆှေးကွညျ့ဦးနျော။ တဈခုမကောငျးတာလညျး ရှိသေးတယျ။ အဲ့နားက ကားရှုပျတော့ ကားရပျရခကျလို့ စိတျပါရှုပျရတာတဈခုပဲ။ ညနလေေးတှလေညျး ထိုငျလို့ကောငျးတယျ။
လိပျစာလေးက Unit ၁၀၇ ၊ အမှတျ ၅၃ ၊ ကမျးနားလမျး၊ Strand Square မှာပါတဲ့။ မနကျ ၈ နာရီကနေ ည ၆ နာရီထိဖှငျ့ပါတယျ။ စနဆေိုရငျတော့ နခေ့ငျးတဈနာရီထိပဲဖှငျ့ပွီး တနင်ျဂနှတေဈရကျပိတျပါတယျတဲ့။